मौसमी साग लट्टे : जान्नेलाई श्रीखण्ड – कृषक र प्रविधि
मौसमी साग लट्टे : जान्नेलाई श्रीखण्ड
रोप्न पर्दैन, बारीमा जताततै आफैँ उम्रन्छ । एक ठाउँ मात्र होइन, पहाडदेखि तराईसम्म पाइन्छ । पकाउन सजिलो, खाँदा स्वादिलो, स्वास्थ्यका लागि पोषिलो के हो ?
यो गाउँ खाने कथा होइन, लट्टेको कुरा हो ।
लट्टे, अहिलेको मौसमी साग । यो यस्तो साग हो, जसलाई न उमार्न गाह्रो छ, न पकाउन । त्यसमाथि पोषणयुक्त पनि । यतिको गुणी साग भएर पनि हामीमध्ये धेरैले लट्टेको सागलाई हेला गरिरहेका हुन्छौं । जबकि यो हाम्रो पुरानो रैथाने खानेकुरा हो ।
के पाइन्छ लट्टेमा ?
लट्टेको साग निकै स्वास्थ्यवर्द्धक मानिन्छ । यसबाट हाम्रो शरीरलाई आवश्यक खनिज पदार्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्थात् लट्टेको सागमा खनिज तत्व फलाम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ । भिटामिन इ, भिटामिन सी र फोलिक एसिडको स्रोत पनि हो यो ।
लट्टे मात्र कहाँ हो र लट्टेको दाना पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । लट्टेको दाना बालबच्चा, गर्भवती आदिका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । यसलाई जुनसुकै खानेकुरासँग पनि मिसाएर खान सकिन्छ । विगतमा कुपोषणबाट बच्न समेत लट्टेको दाना सेवन गरेको पाइन्छ ।
कसरी पकाउने ?
लट्टेलाई आफ्नो स्वादअनुसार जसरी पनि पकाउन सकिन्छ । सामान्य सागपात जस्तै यसलाई पकाएर सेवन गर्न सकिन्छ । आलुसँग मिसाउँदा पनि काइदा हुन्छ । गोलभेडासँग मिसाएर छिपछिप रस हाल्दा पनि कम्ता स्वादिलो हुँदैन । बफ्याएर अचार बनाउँदा पनि हुन्छ ।
कतिपय ठाउँमा लट्टेको दानालाई भुटेर मह अनि घिउसँग मिसाएर पनि सेवन गरिन्छ ।
कहाँ पाइन्छ लट्टे ?
लट्टे जताततै पाइन्छ, पहाडदेखि तराईसम्म । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म । तर, भूगोलअनुसार यसलाई भिन्न भिन्नै नामले चिनिन्छ । सुदूरपश्चिममा यसलाई चौलाई भनिन्छ । तराईमा रामदान वा गेन्हारी साग, पहाडमा लट्टे वा लुँडे ।
कहिले पाइन्छ ?
लट्टेको साग चैत्र-वैशाखको महिनामा पाइन्छ । यो सिजनमा खेतबारीमा आफैँ उम्रिन्छ । रोप्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन ।
झार भनेर फ्यालिन्छ
यति गुणी भएर पनि लट्टेको सागलाई धेरैजसोले पहिचान नै गरेका छैनन् । यसलाई खाने अभ्यास पनि त्यति व्यापक छैन । त्यसैले लट्टेको सागलाई धेरैले उखेलेर फ्यालिन्छ । जबकि यसलाई उपभोग गर्न सकियो भने छाक टार्न वा जिब्रोको स्वाद फेर्न मात्र होइन, स्वास्थ्य लाभ पनि लिन सकिन्छ ।
करेसाबारी वा बार्दली, छतमा गमलामा रोपेर पनि लट्टेको साग उपभोग गर्न सकिन्छ । अहिले कतिपय भेगमा भने लट्टेको सागको व्यवसायिक खेती सुरु गरिएको पाइन्छ ।
ऊर्जाशील समय विदेश बिताएकोमा पछुतो